Ukuveliswa kweTeyile eTshayina kunye neFektri | Jiashun
Iteyiphu yeSilicone:ekwabizwa ngokuba yi-silika ye-silica gel, yenziwa nge-silica gel kwilaphu yeglasi yefayibha ngobushushu obuphezulu, kunye ne-asidi kunye ne-alkali ukumelana, ukunxiba ukuxhathisa, ukumelana nokushisa okuphezulu kunye nokushushu kunye nokumelana nokubola. Ilaphu le-silica gel likwahlulwe layixube ye-silica gel kunye ne-silica gel, ekwahlulahlulwe ibe ngamacandelo amabini e-silicone yamacala amathandathu kunye ne-silicone yamacala amabini
Ukuxuba i-silica gel
Abicah irabha luhlobo zokwenziwa irabha abicah, leyo yenziwa ngokongeza abicah irabha ekrwada ukuya kuluhlu kabini irabha kumatshini ukuxubana okanye ivaliwe umatshini intlama, ngokuthe ngcembe ukongeza silica, oyile abicah kunye nezinye izongezo emva kokudibanisa arhente vulcanizing kunye zokufudumeza vulcanization (arhente vulcanizing yi ikhethwe ngokweemfuno zenkqubo).
1. Njani malunga nesampulu kunye nentlawulo?
Isampuli simahla, kodwa siya kuhlawulisa iindleko zothutho, kodwa siya kubuyisela kuwe iindleko zempahla xa ufaka iodolo.
2. Ngaba uyinkampani orhwebayo okanye umenzi?
Singumvelisi oqeqeshiweyo ngaphezulu kweminyaka engama-20
30% idipozithi kwangaphambili, 70% eseleyo
4. Lide kangakanani ixesha phambili?
Ngokwesiqhelo kwiintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20 emva kokuba kufunyenwe idiphozithi.
5.Yintoni imiQathango yethu yoRhwebo eqhelekileyo?
6.Ulawula njani umgangatho wakho?
Sineenkqubo zokuqinisekisa umgangatho opheleleyo: i-IQC FAS kunye nokujonga ngokwakho
nganye ivelisa inkqubela phambili → i-OQC. Kwaye njengasezantsi:
1. Phambi kwemveliso: ukuthumela iisampulu zangaphambi kwemveliso zokutshekishwa.
2. Ngexesha lokuvelisa: ukuthumela iisampulu zemveliso ngobuninzi ukuze iphinde itshekishwe.
3. Ngaphambi kokuthunyelwa: abathengi 'okanye utyelelo lomntu wesithathu kumzi-mveliso wethu ukuya
jonga umgangatho ngokuthe ngqo okanye naluphi na uhlolo lwamkelekile!
4. Emva kokuthunyelwa: ukuba kukho nayiphi na ingxaki yeempahla zethu ngenxa yempazamo yethu,
Ngokuqinisekileyo siya kuba noxanduva lwayo.
7. Uqinisekisa njani ukuhanjiswa kwezinto ngexesha lam?
Sibeka phambili kwi-odolo yokuthumela ngaphandle kwaye siqhubeka nokuhlaziya inkqubela phambili ukusuka kukunyanzelwa ukuya kunikezelo.
8. Ukuba asinaso isihambisi sokuhambisa ngenqanawa e-China, ungasenzela oku?
Ewe sinokukubonelela ngeyona ndlela yokuhambisa ngenqanawa yokuqinisekisa ukuba ungazifumana iimpahla ngexesha elifanelekileyo ngexabiso elifanelekileyo
9. Singalufumana njani uluhlu lwamaxabiso oluneenkcukacha?
Nceda usinike ulwazi oluneenkcukacha ngemveliso enje ngobungakanani (ubude,
ububanzi, ubukhulu), umbala, iimfuno ezithile zokupakisha kunye nobungakanani bokuthenga.
Egqithileyo DB Camera amalaphu
Okulandelayo: Ilaphu elicwecwe ngelaphu